Kuboshwe 6 ngelezidakamizwa | News24
Kuboshwe 6 ngelezidakamizwa
Bulawayo - Kuboshwe abantu abayisithupha ngezinsolo zokudayisa insangu enesisindo esingi-176kg engaba yizizumbulu zemali endaweni yaseMucheke, eMasvingo ngoMsombuluko.
Amagama abasolwa nguPatience Kwirirai, 29, uGermany Madzova, uFelix Muango, uDefinite Chikuni, uSusan Ziyambe noNorita Mararo kanti bonke banomlando omubi wezidakamizwa.
Laba bonke balindeleke ukuba bavele ngapham,bi kwenkantolo maduze ngamacala okutholakala nezidakamizwa.
OLUNYE UDABA:Bavelile abasolwa ngokutshala insangu
Oyibamba lesikhulumi samaphoyisa aseMasvingo uNkululeko Nduna uqinisekise ukuboshwa kwabasolwa abayisithupha, kubika iBulawayo24.
"Bonke bagcinwe esitokisini kanti balekelela amaphoyisa ophenyweni futhi bazovela maduze enkantolo."